I-Molino del Feo ukuya kwi-6. Ubume obunyulu kunye nentuthuzelo
I-El Molino del Feo yindawo ekhethekileyo ye-30,000m2 ejikelezwe nguMlambo waseSan Juan, nje iyure enye ukusuka eMadrid. Liyindawo yokuzola nobuhle engqongwe yindalo, phakathi kwamahlathi e-oki nemi-oki.
Inezindlu ezi-2 ezizimeleyo ezinomtsalane omkhulu. Owona uphambili sisisila samanzi senkulungwane ye-19 esabiwa kwimigangatho emibini. Kwesi sibhengezo, yindlu ephambili kuphela eza kuqeshwa kwaye enye iya kuvalwa, iqinisekisa ubumfihlo kunye nokukhethekileyo.
Ifumaneka kumbindi wendalo, kubathandi bokuzola kunye nobumfihlo, iyure nje eli-1 ukusuka eMadrid kunye nemizuzu eyi-15-20 ukusuka kwiidolophu ezingalibalekiyo njengeSepulveda kunye nePedraza.
Indawo ejikelezileyo yaziwa ngokuba yiMolino del Feo, njengoko bayibiza ngokuba yi-miller yabo yokuqala. Inezindlu ezimbini ezipholileyo kakhulu, ejikelezwe ziihektare ezi-3 zefama kwaye zodwa kuyo nayiphi na enye i-nucleus ehlala abantu kwindawo. Ifama ijikelezwe nguMlambo iSan Juan onceda undwendwe ukuba luphumle ngesandi salo esipholileyo. Umlambo unomlambo omninzi unyaka wonke, kwaye uhamba ngaphantsi kwendlu. Ukusuka kwifama unokubona iintaba, umlambo kunye namahlathi ejuniper kunye ne-oki: akukho okunye.
Ezi zindlu ziqeshwa kuphela iqela elinye, ngokujonga ubumfihlo kunye nokuzola. Ungarenta kuphela indlu enkulu (amagumbi okulala amabini aphindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela ezimbini, igumbi lokuhlala elikhulu kunye nekhitshi) okanye zombini izindlu kunye (indlu yesibini inamagumbi okulala ama-2 kunye negumbi lokuhlambela ezimbini).
Indlu enkulu sisingqusho ngokwaso. Isasazwa phezu kwemigangatho emibini kwaye isakhiwo senziwe ngomthi wejunipha, kunye neentsika eziveziweyo kunye nemiqadi, kunye nephunga elimnandi kunye neempawu zalo mthi. Kumgangatho ongaphezulu kukho amagumbi okulala ama-3 kunye negumbi lokuhlambela elibanzi. Kumgangatho ongezantsi kukho igumbi lokuhlala, ikhitshi, nelinye igumbi lokuhlambela. Ineendawo ezimbini zokubasa ezilungele ukuphumla ngobusuku obubandayo.
Indlu yesibini yayisakuba yiloom kwaye ngoku isebenza njengendlu yokulala. Ibandakanya amagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlambela ngalinye, kunye negumbi lokuhlala elincinci elinebhedi enesofa ephindwe kabini.
Iibhedi emagumbini zinokudityaniswa kwaye zinxibe njengeebhedi ezingatshatanga (190x90) okanye kabini (190x180). Zombini oomatrasi nezinto zokulala kunye neetawuli zikumgangatho obalaseleyo.
I-El Molino del Feo lithuba elikhethekileyo lokuphumla, ukudibanisa nendalo kwaye ube namava awodwa kunye nabo bahamba nawe.
Ukuhamba unokuthatha uhambo olude ngaphandle kokuthatha imoto, kwaye ngaphandle kokudibana nabanye abahlali.
Eyona dolophu ikufutshane (iVentosilla) imalunga ne-1km kude, nangona ingenazo iinkonzo.
Malunga ne-5km kude yiPradena kunye neCasla ezineendawo zokutyela kunye nevenkile enkulu. Kukwakho nezinye iidolophu kule ndawo ezineendawo zokutyela ezinokutya okuhle kakhulu.
Malunga ne-18km unokutyelela iPedraza, enye yeedolophu ezintle kakhulu eSpeyin; I-12km iSepulveda eneHoces del Duratón emangalisayo, kunye ne-25km Ayllón. Zontathu ziidolophu eziqhelekileyo zaseSegovia ezinomtsalane omninzi, zeyezona dolophu zintle eSpain” network.
Nceda uqhagamshelane nathi ngemisebenzi yendalo ekufuneka yenziwe, kuba unikezelo lwahluke kakhulu (ukunyuka intaba, ukukhwela ibhayisekile entabeni, ukukhwela iphenyane, iindlela zehashe kunye needonki, njl.njl.).
Kangangoko kunokwenzeka, ndiyakuthanda ukukwamkela ngokobuqu kwaye ndikubonise le ndlu endiyithanda kakhulu. Xa kungenakwenzeka ukuba ndibe, umgcini wendlu uya kukunika izitshixo kwaye siya kufumaneka ngefowuni okanye nge-imeyile nantoni na oyifunayo.
Sinikezela ngenketho yokungena kwangethuba (ukungena kwangethuba: 12pm + € 50) kunye / okanye ukuhamba emva kwexesha (uphume kade: 18pm + € 50) ngokuxhomekeke ekufumanekeni.
Kangangoko kunokwenzeka, ndiyakuthanda ukukwamkela ngokobuqu kwaye ndikubonise le ndlu endiyithanda kakhulu. Xa kungenakwenzeka ukuba ndibe, umgcini wendlu uya kukunika izitshixo k…